काठमाडौँमा जस्तै धरानमा पनि लौरो आतंक ! लौरोछाप हर्क साङपाङको भारि अग्रता - Mitho Khabar
May 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on काठमाडौँमा जस्तै धरानमा पनि लौरो आतंक ! लौरोछाप हर्क साङपाङको भारि अग्रता
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकामा ठूला दलका उम्मेदवारलाई असिनपसिन पारिरहेको लौरोले धरान उपमहानगरपालिकामा समेत रुखलाई टक्कर दिन थालेको छ । यसो भैरहदा आम मान्छेहरुले लौरो आतंक भन्दै गफिने गरेको पाहिएको छ ।
कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार किशोर राईको शुरुदेखिकै फराकिलो अग्रतालाई लौरोधारी स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साङपाङले रोकेर अघि बढेका छन् । पछिल्लो गणना अनुसार रुखको ८१२६ मत छ भने लौरोको ८१४० मत छ । एमालेकी मञ्जु भण्डारी भने ६७१३ मतसहित निकै पछाडि छन् । उपमेयरमा भने एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारको टक्कर छ ।
हर्क साङपाङको लौरोले धरानमा अधिकांश एमालेको मत लिएको छ । कांग्रेसको पनि उल्लेख्य मत लौरोमा गएको देखिएको छ । उनी लो प्रोफाइलका लोकप्रिय उम्मेदवार भनेर नेपाल प्रेसले सबैभन्दा पहिले उनको उम्मेदवारीबारे सार्वजनिक बहस गराएको थियो ।